Iran: Voasaritaka Ny Olon’ny Filoha Ahmadinejad · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2012 4:15 GMT
Nandritra ny nikabarian'ny filoha Iraniana Mahmoud Ahmadinejad nandritra ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana tamin'ny 26 Septambra 2012 fa manana vina mikasika ny filaminana vaovao manerantany tsy ahitana ny “fanjakazakan'ny fireharehana” izy, dia nosamborina tao Iran ny mpiandraikitra ny fifandraisany, Ali Akbar Javanfekrand, ary nisy nanafika tao New York kosa ny mpitondra tenin'ny minisiteran'ny Raharaham-bahiny, Ramin Mehmanparast.
Ali Akbar Javanfekr Loharano: Sahamnews
Voaheloky ny fitsarana Iraniana ho “mamoaka fanadihadiana mifanohitra amin'ny fenitra Islamika ,” i Javanfekr tamin'ny volana Novambra 2011, izay lehiben'ny gazetibokin'ny fitondrana IRAN ary voarara tsy mahazo manao asa fanaovan-gazety mandritra ny telo taona ihany koa.
Anisan’ny heloka nanenjehana azy ny fanompana ny Ayatollah Ali Khamenei, izay manana ny teny farany momba ny raharaham-panjakana rehetraao Iran. Nampiakatra ny raharaha teny amin’ny fitsarana ambony i Javanfker ary niharan’ny tsindrihazolena nanomboka hatreo. Notafihan’ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny birao fiasany. Any am-ponja izy ankehitriny.
Efa zatra mibilaogy ihany koa i Javanfekr, ka nikasa haneho hevitra mikasika ny fifandrafiana ara-politika ao Iran. Tamin’ny volana Novambra lasa teo, nosoratany tao amin’ny bilaoginy ny olana hatrehiny, Shahed:
Manontany tena ny vahoaka, nahoana i Javanfker izay mba nanana raharaham-pitsarana mihitsy [tsy mbola niatrika fitsarana], no lasa manana raharaham-pitsarana 15 hanenjehana azy ao amin’ny rafi-pitsarana ao amin’ny firenena, nanomboka ny fotoana naha-voatendry azy ho lehiben’ny andrim-panjakana ao Iran?
New York, toerana tsy milamina ho an'ny olon'i Ahmadinejad
Nandritra izany fotoana izany, nifanehitra tamin’ ireo vondrona mpanao fihetsiketsehana teo akaikin’ny Foiben’ny Firenena Mikambana ao New York ny lefitry ny mpitondra tenin’ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny Iraniana, Ramin Mehmanparast tamin’ny Alarobia 26 Septambra lasa teo. Narovan'ny polisin'i New York izy hitandroana ny ainy. Nodarohan’ireo mpanao fihetsiketsehana izy no sady nororan’izy ireo ihany koa ny tarehiny.
Ao amin'ny Balatarin, tranonkala fifampizaràna rohy, nandrohy sary avy amin’ny gazety Wall Street Journal ny mpiserasera, ary nanoratra hoe “hitanao amin’ny mason’i Mehmanpart ny tahotra”.
Nanoratra i Darzarehbin fa tsy mendrika [manala baraka] ny mandrora amin’ny tarehin’olona, na dia i Mehmanparast aza ilay olona .
Hoy ny bilaogera iray, Farvartish Rezvanieh nanoratra[fa]:
Ny andian'olona nanafika an'i Mehmanparast dia ny mpanohana ny Mojahijinin'ny vahoaka izay te-hilaza ny tenan'izy ireo ho “Iraniana tezitra mipetraka ao New york”
Andro vitsivitsy izao dia manao fihetsiketseham-panoherana an'i Mahmoud Ahmadinejad sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona any Iran ny Iraniana monina ao New York.
Nanao hetsi-panoherana tao New York ihany koa ny Havaar, tetikasa Iraniana manohitra ny ady, ny sazy sy ny famoretana ataon’ny governemanta. Mampiasa jiro mipendrapendrana ny Havaar “hibodoana” ny rindrin'i Manhattan sy hampisehoana ny sarin'ireo gadra politika (ambony)
Nandritra izany fotoana izany, nikarakara fampisehoan-kery maromaro tao New York ny Mojahijinin'ny Vahoaka.